आफ्नो स्थानमा बसेर अरुलाई असर नपुर्याइ लेख्ने हो भने आचारसंहिताको आवश्यकता नै छैन : अनुज घिमिरे - MeroReport
आफ्नो स्थानमा बसेर अरुलाई असर नपुर्याइ लेख्ने हो भने आचारसंहिताको आवश्यकता नै छैन : अनुज घिमिरे
प्राणाीशास्त्र (Zoology)का स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता अनुज घिमिरेलाई विशेषतः माकुरा, सर्प र चराको अध्ययन गर्न मनपर्छ । यसै शिलशिलामा उनले भर्खरै मनाङ पुगेर चराको अध्ययन गरेर आए। घिमिरेले चरामा नै आफ्नो शोधपत्र पनि गरेका छन् । अनुजलाई अरुले फिरन्ते समेत भन्छन् । किनभने उनको पेशा नै घुमिरहन पाईने खालको छ । तर अनुज भन्छन्- वन्यजन्तुको अध्ययन गर्न सजिलो छैन । नेपालमा प्राणाीशास्त्र (Zoology) का क्षेत्रमा खासै काम नभएकाले पनि यो क्षेत्रमा निकै राम्रो अवसरहरु रहेको बताउँछन् अनुज । साथै उनको रुची फोटोग्राफीमा पनि उत्तिकै छ । खासगरी हिमाल र वन्यजन्तुको फोटो खिच्नमा नै अनुज रमाउँछन् । वन्यजन्तुको अनुसन्धान तथा फोटोग्राफीका अलावा अनुस ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै अनुज घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
अनुज घिमिरेलाई सोसल मिडियामा के भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ? बताइदिनुस न ।
मलाई सबैले नामले भन्दा पनि जुलोजिष्ट (zoologist) र एजी (AG) भनेर चिन्छन् । र म चाहिँ आफुलाई जुलोजी (Zoology) मा काम गरिरहेको वैज्ञानिक भनेर चिनाउन चाहान्छु ।
तपाई त ब्लगिङ पनि गर्नुहुँदो रहेछ, ब्लगिङ गर्न कहिलेलेखि थाल्नुभयो र कसरी शुरु गर्नुभयो?
मैले सन् २००५ देखि ब्लगिङ शुरु गरेको हुँ । त्यो बेलामा कविता धेरै लेख्थे । विदेश बस्ने एक जना दाईले ब्लगमा राख कविताहरुलाई भनेकाले ब्लग शुरु गरेको हुँ । तर त्यो बेलामा सक्रिय भने थिईन । अनि सन् २००७/८ देखि चै सक्रिय रुपमा कविताहरु राख्न थालेको हुँ । त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै जिन्दगिमा घटेका घटनाहरुलाई पनि समेट्दै लेख्दै ब्लगमा राख्न थालेको हुँ ।
तपाई जुलोजि (Zoology)मा रुचि भएको मान्छे, कविता चै केको बारेमा लेख्नु हुन्छ नि ?
कविता त मिश्रीत हुन्छ । अब मेरो रुचिको विषय त सामेल हुन्छ नै साथमा मायाका कुराहरु पनि हुन्छ । कविताहरु पनि ६/७ सय वटा भईसक्यो । साधारणतयाः प्रकृति तथा मायाका विषय मै लेखिन्छ भनौ ।
के का लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ? कस्ता विषयवस्तु तपाईको रोजाईमा पर्छन?
शुरु शुरुमा त आफ्नो कविताहरु राख्नका लागि गर्थे तर अहिले चाँही आफुले जानेको कुरा बाँड्नका लागि पनि ब्लगिङ गर्छु । विशेषतः वन्यजन्तुका बारे जानकारी दिनको लागि पनि ब्लगिङ गर्छु । मेरो रुचि कै विषयवस्तु समेट्ने गर्छु । अनि कतै घुम्न गए भने त्यस ठाँउको बारेमा नि ब्लगिङ गर्छु ।
जस्तो कि : सालक तथा गिद्धको बारे जानकारी दिन ब्लगिङ गरेको छु । प्रायः सबैजना डराउने माकुरादेखी डराउनु पर्दैन यो हाम्रो घरको लागि भ्याकुम ल्किनरको काम गर्छ भन्ने बारेमा जानकारी मुलक ब्लगिङ पनि गरेको छु ।
तपाईले http://mrzoologist.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि चलाउनुहुन्छ? अनि ब्लगिङलाई निरन्तरता दिन कत्तिको सजिलो छ त ?
एजओदर भर्स भन्ने ब्लग पनि चलाउँछु । यसमा चाहि विज्ञानको बारे जानकारी दिन ४/५ जना वैज्ञानिकहरु मिलेर खोलेका हौ ।
शुरु शुरुमा चाहिँ के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने अल्लि नबुझे र नै बिचमा छोडे तर पछि बिस्तारै बुझे पछि फेरी निरन्तरता दिन थाले । ब्लगिङ गर्न सजिलो त खासै हुन्न । पूर्णकालिन रुपमा ब्लग नै गर्नेलाई मात्र हो नत्र अरुलाई निरन्तरता दिन त गाह्रै छ नि ।
तपाई सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छ ?
अहिले चै बल्ल बिस्तारै राम्रो हुन थालेको छ कि जस्तो लाग्छ । छिटो सुचना पाउन एकदमै सजिलो भएको छ । सोसल मिडियालाई प्रयोग गर्न जाने त धेरै राम्रो छ ।
अरुका ब्लग कत्तिको पढ्नुहुन्छ? विशेष गरी कस्ता विषयवस्तु समेटिएका ब्लग तपाईँका रोजाइमा पर्छन् ?
यो कुरा चाहिँ ब्लगरले दिने विषयवस्तुमा भरपर्छ । जस्तो कि मलाई राजनितीक कुरामा खासै रुचि छैन तर अरु रमाईला कथा कविता छन् भने पढ्छु । वन्यजन्तुको बारे त कसैले लेख्दै लेख्दैन तर कसैले लेखिहाले भने पढ्छु ।
आफ्ना कुरा ब्यक्त गर्न अहिले युवाहरुले ब्लगिङप्रति आर्कषित भई रहेका छन, नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ ? सदुपयोग या दुरुपयोग ?
म त सदुपयोग नै मान्छु । अरुका विषयवस्तु चोरेर गरे भने त नराम्रो नै हो तर अरुलाई केही जानकारी दिन ब्लगिङ गर्छ भने त्यो त गज्जबै हो नि ।
हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसलमिडियाका थलोहरु ब्लग, ईनस्टाग्राम, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो ?
फेसबुक चाहिँ मलाई दिक्क नै लाग्छ । किनभने सामाजिक सञ्जाल भनिसके पछि त मान्छेहरुसँग नेटवर्क बनाउने तरिकाको हुनु पर्ने हो । तर चिनेकै मानिसहरु बिच मात्र कुराकानी हुने हुन्छ त्यही भर अल्लि दिक्क लाग्छ । ट्वीटरमा चाहिँ बिविध प्रकारका मानिसहरुसँग अन्र्तक्रिया हुन्छ । धेरै कुरा जान्न पाईन्छ । ईनस्टाग्राम चाहिँ फोटो राख्न राम्रै नै छ । ब्लगमा आफ्ना कुराहरु राख्न अनि विभिन्न कुराको जानकारी दिन राम्रो छ ।
यि सोसल मिडियाका थलोका फरक भन्दा नि यिनीहरुका आ-आफ्नै प्रकारका विशेषता छन् भनेर बुझौ न ।
मलाई चै सामाजिक विषयलाई स्थान दिएको जस्तो लाग्दैन । म त ब्यक्तिगत कुराहरुमा नै धेरै ब्लग देख्छु ।
आफ्नो स्थानमा बसेर अरुलाई असर नपुर्याइ लेख्ने हो भने आचारसंहिताको आवश्यकता नै छैन ।
मैले बुझेसम्म चै ब्लगलाई नागरिक पत्रकारिता भन्न त अल्लि मिल्दैन । ब्लगमा लेख्ने कुरा र पत्रकारिताका कुरा फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
सन् २००७ तिर एक जना केटीले मेरो ब्लग कमेन्ट गर्नुभएको थियो । मैले चाहिँ सबैले कमेन्ट गर्छन भनेर खासै याद गरेको थिईन । पछि ट्विटर अकाउन्ट बनाए पछि अनुज घिमिरे भनेर सर्च गर्दा उही केटीले अनुज घिमिरे भन्ने लेखक खुबै मनपर्छ भनेर ट्वीट गरेको भेटे । उहाँले मेरो बारे धेरै नै ट्वीट गर्नुहुँदोरैछ । पछि अनुज घिमिरे मै हुँ भन्दा उँहा छक्क पर्नु भएको थियो । यत्तिकै कुरा हुदैँ जादाँ उहाँसँग एक वर्षसम्म माया बसेको थियो ।
Comment by Prakash Lamichhane on April 9, 2015 at 1:10pm
बधाई छ धेरै धेरै । :)
Comment by Amuna Chapagain on April 9, 2015 at 10:48am